Waxbarashada M.M Dhagaxbuur - Cakaara News
Waxbarashada M.M Dhagaxbuur
Dhagaxbuur (Cakaaranews )khamiis 2da June 2016. Madaxa xafiiska waxbarashada Maamulka magaalada dhagaxbuur oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in meel fiican ay marayso heerka waxabarashada maamulka magaalada dhagaxbuur islamarkaana loo diyaargaroobay imtaxaankii fasalka 8aad ee heer deegaan.
Hadaba Madaxa Xafiiska Waxbarashada Maamulka Magaalada Dhagaxbuur mudane Faysal Cabdiqaadir Sulub ayaa sheegay in Tirda dugsiyada mm dhagaxbuur marayaan 11dugsi oo 10 kamid ahi ay dawli yihiin meesha midka soo hadhay uu yahay dugsi gaarlooleeyahay. waxayna kala yihiin 4 Dugsiyada hoose, 4 dugsiyada hoose/dhax iyo 2 dugsiyada sare ah. Wuxuuna intaa kudaray in Tirada guud ee ardayda m.m dhagax buur ay yihiin 8583 Arday oo 5262 ay yihiin lab meesha 3321 ardayna ay tahay dhadig. Iyadoo Macaliminta dugsiyaduna ay tiradoodu kabadntahay 251 macalin oo heerka aqoontooduna kala tahay 5 macalin waa Mastert, 30 macalina waa degree, 68macalina waa Diplome, iyo waliba 147 macalin oo T.T.I. ah.
Sidookale madax xafiiseedka ayaa xusay in kor loo qaaday nidaamka baris barasho iyadoo la raacayo qorshayaashii iyo yoolasha siyaadeed ee xafiiska waxbarashada iyo XDSHS ee ah Kor u qaadida tayada waxbarashada, kaqaybgalka dadwaynaha, sii adkaynta nidaamka xisbinimo iyo mamulka suuban ee dhanka xafiiska, baraayaasha aradaydaba, dhiirigalinta gabdhaha, iyo waliba dhisida akhlaaqda iyo ladagaalanka fikirada xunxun ee argagixisanimo.
Wuxuuna intaa kudaray in ka xafiis ahaan ay ka midho dhaliyeen islamarkaana ay kor u qaadeen dhanka kaqaybgalka dadwaynaha iyo ladagaalanka fikirada xunxun ee aragagixisanimada maadaama oo kaqaybgalka bulshadu ay tahay muhiimada ugu horaysa ee waxbarashada.
Ugudanbayna wuxuu xusay in kulan joogta ah ay layeeshaan dhaaman waalidiinta ardayda waxkabarata dugsiyada maamulka magaala dhagaxbuur, islamarkaana ay sameeyeen iskuxidhka ardayda ee 1-5 iyo sidookale barayaasha kahawlgala M.M Dhagaxbuur iyadoo gudiyada waxbarashaduna ay si toosa u shaqeeyaan.